नेपालमा भित्रभित्रै कोरोनाको संक्रमण फैलिइसक्दा पनि किन राज्य र सरोकारवाला यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा खटेनन् ? – Dainik Sangalo
नेपालमा भित्रभित्रै कोरोनाको संक्रमण फैलिइसक्दा पनि किन राज्य र सरोकारवाला यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा खटेनन् ?
काठमाडौं, साउन २० । नेपालमा लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमित दुई जना मात्र थिए। झन्डै चार महिनामा लकडाउन हटे पनि संक्रमण भने बढेको बढ्यै छ। सोमबारसम्म संक्रमितको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको छ।
त्यसपछि हालसम्म झन्डै १९ हजार संक्रमित थपिएका छन्। जेठ १९ मा मात्रै २ सय ३७ जनामा संक्रमण फेला परेको थियो। असार १९ मा एकै दिन ४ सय ७० जनामा संक्रमण देखियो। त्यसको ठीक एक महिनापछि सोमबार ४ सय १८ जना संक्रमित भेटिए। यो तथ्यांकमा काठमाडौं उपत्यकाको संख्या ५१ छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले संक्रमण पुष्टिपछि सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको बताए। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको भीड बढेपछि संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
कोरोनाको पहिलो चरणमा नेपालमा विदेशबाट आएका नेपालीमा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसको दोस्रो चरणमा कैलालीकी महिलामा विदेशबाट आएका संक्रमितबाट कोरोना सरेको पाइएको थियो। मन्त्रालयका पूर्वविशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार यात्रा नगरेको स्थानीयमा संक्रमण देखिनु दोस्रो चरण हो। कोरोनाको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा फैलिएको अवस्था हो।
Prevसमुदायस्तरमा कोरोना देखिएपछि सप्तरीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी
Nextकोरोना महामारी फैलिदै जान थालेपछि फेरी लकडाउन गर्ने तयारीमा लागेको हो सरकार ?
महामारी कि मजाक : बैंकमा ठेलमठेल, जताततै मास्क !